WARBIXIN: LIX Xiddig Oo Ay Chelsea La Soo Saxiixan Karto Janaury Hadii Laga Qaado Ganaaxa Suuqa – Kooxda.com
HomePremier LeagueWARBIXIN: LIX Xiddig Oo Ay Chelsea La Soo Saxiixan Karto Janaury Hadii Laga Qaado Ganaaxa Suuqa
September 10, 2019 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta, Warbixino 0
Kooxda chelsea ayaa laga yaabaa in ay xiddigo cusub la soo saxiixan karaan suuqa January hadii laga ogolaado racfaanka ay ka qaadanayaan ganaaxa ka saaran suuqa kala iibsiga.
Wargayska Daily Express ayaa soo saaray warbixin uu ku sheegay 6 xiddig oo laga yaabo in uu Frank Lampard u dhaqaaqo saxiixooda suuqa January si uu ugu xoojiyo kooxdiisa qaybta dambe.
Lampard ayaa si adag ku bilowday shaqadiisa tababaranimo ee chelsea isaga oo badiyay kaliya hal kulan 4-tii kulan ee ugu horeeyay ee uu hogaamiyay horyaalka premier League.
Difaac xun ayaa sabab u ahaa rikoodhkan xun xilli daafacii ugu khibrada badnaa kooxda ee David Luiz uu si lama filaan ah uga tagay kooxda kuna biiray Arsenal.
Antonio Rudiger ayaa ka soo laabtay dhaawac halka xiddigaha Christensen & Kurt Zouma ku fashilmeen in ay tababaraha qanicyaan sidaas darteed chelsea ayaa u dhaqaaqi karta saxiixa Milan Skriniar.
Daafaca 24 jirka ah ee reer Slovakia ayaa lagu qiimeeyaa 60 milyan oo euro waxana ay tartan adag kala kulmaysaa kooxda Man City oo dhankooqa xiiso u qaba saxixia xiddiga.
Dias ayaa badal u noqon kara Skriniar waana xiddig ka qiimo yar xiddiga kooxda Inter Milan inkasta oo uu naftiisa ka dhigay daafaca 1-aad ee xulka qaranka Portugal.
Daafaca dhexe ayaa ciyaaray daqiiqad kasta oo kooxda Benfica ciyaarta kulamada horyaalka ilaa haatan waxana horay loola xidhiidhinayay premier League.
Wargayska Football London ayaa sheegaya in ay chelsea indha-indheeyayaal u dirtay 22 jirkan bilowgii xilli ciyaareedkan kulan ay kooxdiisu la ciyaaraysay kooxda Porto.
Kooxaha Man United iyo Wolves ayaa dhankooda lala xidhiidhinayay xiddigan intii uu furnaa suuqii xagaagan.
Thomas Meunier (Paris Saint-Germain):
Cesar Azpilicueta ayaa si adag ku bilowday xilli ciyaareedkan isaga oo ku jira qaab ciyaareed xun iyada oo uu shaki weyn soo galay mustaqbalkiisa kooxda chelsea.
Reece James ayaa haatanba loo arkaa badalka Cesar Azpilicueta inkasta oo uu da,yarku ku maqan yahay dhaawac wakhti fog ah.
Dhanka kale Lampard ayaa dareenkiisa u jeedin doona xiddiga kooxda PSG iyo xulka Belguim ee Thomas Meunier kaas oo uu dhacayo heshiiskiisa kooxda reer France.
Ma ahan dookha 1-aad ee daafaca Midig ee kooxda PSG Waxana laga yaabaa in ay heshiis hordhac ah ka sii saxiixato si xor ahna ku hesho xagaaga dambe ama ay qiimo aad u jaban ku hesho suuqa January.
Sergi Roberto (Barcelona):
Inkasta oo uuna halis ahayn hadana dhaawacii soo gaadhay xiddiga Emerson Palmieri ayaa heegan galiyay kooxda Chelsea marka loo eego in uu Emerson Palmieri noqday daafaca bidix ee ugu muhiimsan kooxda.
Waxa la sugi doonaa lana arki doonaa in uu Alonso galo qorshaha Lampard laakiin u dhaqaaqista Sergi Roberto ayaa fursad fiican siinaysa chelsea.
Roberto ayaa ka ciyaari kara labada garab ee daafaca iyo waliba khadka dhexe isaga oo leh kubad haysasho fiican marka loo eego in uu u ciyaarayay Barcelona tan ilaa 2010.
Heshiiska xiddiga reer Spain ee Barcelona ayaa dhici doona 2022 waxana laga yaabaa in ay Barcelona iska iibiso xiddiga ka hor inta ayna lacag aad u yar ku lumin xiddiga.
Ryan Fraser (Bournemouth):
Arsenal ayaa xiiso u qabtay xiddiga Ryan Fraser xagaagan laakiin waxa ay dooratay in ay u dhaqaaqdo saxiixa xiddiga Nicolas Pepe.
Ryan Fraser ayuu heshiiskiisa Bournemouth dhici doona xagaaga dambe waxana uu ilaa haatan diidan yahay in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda.
Xiddiga reer Scotland ayaa kaliya jira 25 sano waxana uu leeyahay khibrad fiican oo premier League ah waxana uu badalka mustaqbalka u noqon karaa xiddigaha 30 jirka ah ee Pedro iy Willain waxana ay ku heli karaan lacag aad u yar.
Saxiixi Pulisic ayaa soo afjaray badalka ay Chelsea u raadinaysay Hazard inkasta oo ay jiraan warr sheegaya in ay Blues u dhaqaaqi doonto xiddig kale oo garabka ah.
Wilfried Zaha ayaa doonayay in uu isaga tago kooxda Crystal Palace xagaagii isaga oo doonayay in uu ku biiro Arsenal laakiin heshiiska ayaan dhicin sababla xidhiidha qiimaha Palace dalbanaysay oo dhamaa 80 milyan oo euro.
Chelsea ayaa diyaar u ah in ay bixiso qiimahaas hadii laga qaado ganaaxa si ay xiddiga ugu xoojiso kooxda xagaaga.